I-Loft flat 120 square kumaphandle akufutshane nesixeko
Ormesta, Örebro län, Sweden
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguThomas
Igumbi eliphezulu elinezixhobo zeofisi. Uya kuhlala elizweni kodwa ngomgama webhayisikile ungene embindini. Ngokuqinisekileyo ukukhwelana kwamahhala, kunye nethuba lokubona iikati kunye neenkukhu. I-Netflix ifakiwe.
Unawo wonke umgangatho we-120 yesikwere onamagumbi amathathu kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye neWC enebhafu. Kukho iibhedi ezintlanu (4 x 105 cm kunye ne-120 cm) kunye ne-sofa enezihlalo ezi-3 ngase-TV.
Kwisithili sethu, i-Ormesta, utya emaphandleni kodwa usekufuphi nedolophu. Edolophini kuthatha imizuzu engama-30 kwaye uhambe, imizuzu eyi-10 kunye nebhayisekile okanye imizuzu emi-5 ngemoto. Ziimitha ezili-1000 ukuya eyunivesithi kunye neemitha ezingama-800 ukuya eLake Hjälmaren kunye nendawo yokugcina iintaka kunye nomjikelo wayo kunye neendlela zokuhamba.
Sihlala kumgama weemitha ezingama-80 kwesinye isakhiwo kwaye siyafumaneka ukuze sibuze imibuzo. Sikwathetha isiNgesi kunye nentetho yezandla.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ormesta